निशुल्क मुटुरोग परिक्षण शिबीरमा ११ सयको परिक्षण
पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुश्माबजारमा सम्पन्न दुई दिने मुटुरोग परिक्षण शिविरमा १ हजार एक सय जनाको परिक्षण गरिएको छ । दुर्गम बस्तीमा पुगेर मुटुरोगको परिक्षण गर्ने अभियानका क्रममा शनिबार आइतवारगरी दुई दिन संचालित शिविरमा एक हजार एक सय जनाको परिक्षण गरिएको हो । धौलागिरी अञ्चलका दुर्गमबस्तीका बासिन्दाको मुटु सम्बन्धी समस्या परिक्षण गर्ने र उनीहरुको निशुल्क उपचार गर्ने उद्देश्य सहित दुई दिने शिबीर सञ्चालन गरिएको थियो ।
पर्वतमा क्रियाशिल पाँच वटा लायन्स क्लबको आयोजना र मुटु बचाउँ अभियान लगायतका संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित दुर्गम बस्तीका लागि लक्षित शिबीरमा पहिलो दिनमा ६ सय र दोस्रो दिनमा पाँच सय भन्दा बढिको परिक्षण गरिएको थियो । बरिष्ठ मुटुरोग बिशेषज्ञ डा. अनिल भट्टराईको नेतृत्वमा आएको टोलीले बिरामीको परिक्षण गरेको हो ।
शिबीरमा सबैभन्दा बढी ब्लड प्रेसरका बिरामी भेटिएको बरिष्ठ मुटुरोग बिशेषज्ञ डा. अनिल भट्टराईले जानकारी दिए । पहिलो दिन परिक्षण गरिएका बिरामीहरुमा ४ जना मुटुमा प्वाल परेका बिरामी फेला परेका छन भने ७ जना भन्दा बढी भल्ब थुनिएका बिरामी भेटिएका छन । यसैगरी मुटुसम्वन्धी गम्भीर समस्या देखिएका १५ जना गरी २६ जना लाई रिफर गरिएको हो । उनीहरुलाई थप परिक्षण गर्नुपर्ने भएकाले काठमाण्डौ बोलाइएको डा. भट्टराईले बताए ।
दुई दिन सम्म संचालित शिविरमा परिक्षण गरिएका बिरामीहरु मध्ये २६ जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौ रिफर गरिएको छ । चल्ने शिबीरमा दुई दिन सम्म परिक्षण र उपचार गरिने लायन्स क्लब अफ शिबालयका अध्यक्ष बिषमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । शिबीर आयोजना गर्न एन.आर.एनका संयोजक कुल आचार्यले ७० हजार, लायन्सका कुश्मा स्थित डिष्ट्रिक पदाधिकारीहरुले ४० हजार र लायन्स डिष्ट्रिक गर्भनर बालकृष्ण बर्लाकोटीले २५ हजार सहयोग गरेका छन् ।
दुई दिनसम्म चलेको शिविरमा पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र कास्कीका विभिन्न स्थानका विरामीहरु सहभागि भएका थिए । उक्त टोलिले यस अघि फलेवास, तिलाहार लगायतका गाविसमा पनि शिविर संचालन गरेको थियो ।